Qubanaha » Dhageyso: Hanti Dhawraha oo ka hadlay dilkii Wasiir Cabaas Siraaji.
Dhageyso: Hanti Dhawraha oo ka hadlay dilkii Wasiir Cabaas Siraaji.
Hanti Dhawraha Guud Qaranka, Dr. Nuur Faarax Jimcaale, ayaa ka tacsiyadeeyay geerida naxdinta leh ee ku timid Wasiirkii Hawlaha Guud ee Xukuumadda Somaliya, Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji.
Askar ilaalo u ahayd Hanti Dhawraha, ayaa waxaa la sheegay in ay dileen Wasiirka, ka dib markii ay ka shakiyeen gaari uu la socday, oo ku soo dhawaaday gaari kale oo uu watay Hanti Dhawraha.
Hanti Dhawraha, ayaa wax shil ah ku tilmaamay tallaabada lagu dilay Wasiirkii ugu da’da yaraa ee Xukuumadda Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre, waxaana uu sheegay in uu aad uga xun yahay geeridaasi, isla-markaana ay xanuunjineyso.
Hanti Dhawraha oo la hadlay Idaacadda Shabelle, waxna laga weydiiyay sida ay wax u dhaceen, ayaa sheegay in ilaaladiisa iyo ilaaladii Wasiirka ay isu soo dhawaadeen, shakina uu soo kala dhex galay, isla-markaana ay is rasaaseeyeen.
“Askarta ayaa isu soo dhawaatay, is qoonsatay, isna xabadeysay. Waa shil ku dhacay is afgarasho la’aan iyo kala shaki, walaalkey baana ku xumahay, aad baana uga xumahay.” Ayuu yiri Dr. Nuur Faarax Jimcaale, Hanti Dhawraha Guud Qaranka.
Hanti Dhawraha, ayaa sidoo kale yiri “Wax wanaagsan maaheen, wax fiican maaha, dhib baa dhacay, dhibkana sidaasuu ku dhacay.”
Nuur Faarax Jimcaale, ayaa waxaa uu qiray in uu socdo baaritaano ay hay’adaha ammaanku ku xaqiijinayan sida ay wax u dhaceen, wuxuuna ka gaabsaday in uu ka horudhaco baaritaanada socda, isla-markaana uu baaritaanada u dhaafayo hay’adaha ku shaqada leh.
Bulshada Somaliyeed, ayaa dal iyo dibadba carro xoog lihi ka muujisay in nin dhalinyaro ah oo qiimaha intaa le’eg lahaa lagu dilo shaki uun.